Imise milyan oo gini ayay bixinaysaa Kooxda Barcelona si ay Liverpool uga hesho midkooda Mohamed Salah ama Sadio Mane? – Gool FM
Haaruun February 25, 2020
(Manchester) 25 Feb 2020. Sida wararku ay sheegayaan Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa lagu soo waramayaa inay bixinayso lacag dhan 225 milyan oo gini si ay ugala soo wareegto midkood Mohamed Salah iyo Sadio Mane oo ka yimid Liverpool sida wararka ay sheegayan.
Mane iyo Salah labaduba waxay udub dhexaad u yihiin kooxda Liverpool taasoo ah tan hoggaanka u horyaalka Premier League, waxaana lagu qiimeeyaa 135 milyan oo gini sida laga soo xigtay Transfermarkt.
Jariiradda The Mirror ayaa warinaysa in Liverpool ay heshiis la gaartay kooxda Barcelona markii ay ka iibisay Philippe Coutinho taas oo u baahan kooxda reer Catalan inay ku bixiso lacag dhan ciyaartoydii Reds muddo saddex sano ah.
Warbixinta ayaa intaas ku dareysa in lacagtaas ay ku fadhido adduun dhan 89 milyan oo gini oo ay tahay inay bixiso lacagta ugu sarreysa ee ay Barcelona ka hesho ciyaartoy qiimo sare leh.
Haddii Blaugrana ay u dhawaato Salah ama Mane, warbixinta waxay sheegaysaa inay bixiyaan 225 milyan oo gini.
Coutinho ayaa ku guul darreysatay inuu saameyn ku yeesho Barcelona, wuxuuna amaah ugu aaday kooxda Bayern Munich xagaagii lasoo dhaafay, taas oo ka dhisan dalka Jarmalka.
Si kastaba ha ahaatee, Liverpool dhibaato ayey ku noqonaysaa inay wayso midkooda Salah iyo Mane kuwaasoo tiir u ah kooxda Liverpool oo sanadkan rabta inay gacanta ku dhigto horyaalka Ingiriiska oo muddo 30-sano oo aysan ku guuleysan.